Herb ntụ ntụ
organic ntụ ntụ
Yohimbe n'ụgbụgbọ wepụ
St Jọn wort wepụ
Lyophilized eze jelii powder
[Latin aha] Huperzia serratum [Source] Huperziceae dum ogwu si China [Ọdịdị] Brown na-acha ọcha [mgwa] Huperzine A [nkọwapụta] Huperzine A 1% - 5%, HPLC [Solubility] soluble na chloroform, methanol, ethanol, ubé soluble na mmiri [Particle size] 80 ntupu [Loss na ihicha] ≤5.0% [Arọ metal] ≤10PPM [pesticide fọduru] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA [Nchekwa] Store na jụụ & akọrọ ebe, na-pụọ kpọmkwem ìhè na okpomọkụ. [Adị ndụ] 24 Ọnwa ole [ngwugwu] Juru n'ọnụ na ...
FOB n'arọ: US $ 0,5 - 9.999 / n'arọ
Min.Order ibu: 100 kgs
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 kgs kwa ọnwa
[Latin aha] Huperzia serratum
[Source] Huperziceae dum ogwu si China
[Ọdịdị] Brown na-acha ọcha
[Mgwa] Huperzine A
[Solubility] soluble na chloroform, methanol, ethanol, ubé soluble na mmiri
[Particle size] 80 ntupu
[Loss na ihicha] ≤5.0%
[Arọ Metal] ≤10PPM
[Pesticide fọduru] EC396-2005, USP 34, EP 8.0, FDA
[Nchekwa] Store na jụụ & akọrọ ebe, na-pụọ kpọmkwem ìhè na okpomọkụ.
[Adị ndụ] 24 Ọnwa ole na
[Ngwugwu] Juru n'ọnụ na akwụkwọ-rụọ na abụọ plastic-akpa n'ime.
[Gịnị bụ Huperzine A]
Huperzia bụ ụdị nke akpaetu na-etolite China. Ọ bụ yiri ka club mosses (na Lycopodiaceae ezinụlọ) na a maara na ụfọdụ ọkà mmụta ihe ọkụkụ dị ka Lycopodium serratum. The dum njikere akpaetu e ji mee omenala. Modern herbal preparations na-eji nanị ndị ahụ dịpụrụ adịpụ alkaloid maara dị ka huperzine A. Huperzine A bụ ihe alkaloid hụrụ na huperzia na a kọrọ iji gbochie mmebi nke acetylcholine, otu ihe dị mkpa umi mkpa site ụjọ usoro na-ekesa ozi si cell na cell. Animal research aro ka huperzine A nwere ikike iji chebe acetylcholine nwere ike karịrị nke ụfọdụ ọgwụ na ọgwụ ọjọọ. Loss nke acetylcholine ọrụ bụ a bụ isi atụmatụ nke ọtụtụ ọrịa nke ụbụrụ, gụnyere ọrịa Alzheimer. Huperzine A pụkwara a na-echebe utịp ke ụbụrụ anụ ahụ, n'ihu na-amụba ya n'ọnụ nwere maka inyere belata mgbaàmà nke ụfọdụ ụbụrụ ọrịa.
[Function] Ji ọzọ ọgwụ, huperzine A a chọpụtara na-eme ihe dị ka a cholinesterase inhibitor, a ụdị nkà mmụta ọgwụ na-eji iji gbochie mmebi nke acetylcholine (a chemical dị oké mkpa ka mmụta na ebe nchekwa).
Ọ bụghị nanị na-eji dị ka a ọgwụgwọ maka ọrịa Alzheimer, huperzine A na-kwukwara na welie mmụta na ebe nchekwa na-echebe megide afọ metụtara cognitive ojuju.
Ke adianade do, huperzine A na mgbe ụfọdụ a na-eji mbo mbuli ike, dịkwuo alertness, na aka na ọgwụgwọ nke myasthenia gravis (ihe autoimmune aghara nke na-emetụta uru ahụ).
Previous: Green tii wepụ
Next: Kava wepụ
Huperzia Serrate Pee
Reishi ero wepụ
Ekwentị: 0086 574 27855888
Ekwentị: 0086 574 26865651
The umeala mmanụ aṅụ anu bụ otu n'ime uwa kasị mkpa ntule. Aṅụ ndị na oké mkpa n'ihi na mmepụta nke nri na anyị na ...
© Copyright - 2016-2017: All Rights echekwabara. - Power site Globalso.com